ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ခု လက်ခံ ရရှိထားကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ် ပစ်မှတ် #အဲဗာတန် - SPORTS MYANMAR
ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ခု လက်ခံ ရရှိထားကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ် ပစ်မှတ် #အဲဗာတန်
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ နည်းစနစ် ဒါရိုက်တာ အီဒူး ဟာ ဂရီမီယို အသင်းရဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား အဲဗာတန် ကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် နေပြီး ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသင်းတစ်သင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ခုကို တရားဝင် လက်ခံ ရရှိထားကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။
ဘရာဇီးအသင်း ကိုပါအမေရိက ဖလား ချန်ပီယံဆု ရရှိရာမှာ အဓိက ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား အဲဗာတန် ကို ခေါ်ယူဖို့ အာဆင်နယ် အသင်း အပြင် အေစီမီလန် ၊ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းတို့ကလည်း စိတ်ဝင်စား နေကြပါတယ် ။
အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ အဲဗာတန် ကတော့သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ အသင်းတစ်သင်းက တရားဝင် ကမ်းလှမ်း ထားတယ်လို့ ဝန်ခံ ပြောကြားလိုက်ပြီး အသင်း နာမည် ကိုတော့ ပြောလို့ မရကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။
Arsenal’s Spanish head coach Unai Emery gestures on the touchline during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Arsenal at Wembley Stadium in London, on March 2, 2019. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
အဲဗာတန် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘရာဇီး စီရီးအေ လိဂ်မှာ ပုံစံကောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၈ ပွဲ ကစားရာမှာ သွင်းဂိုး ၁၀ ဂိုး ၊ ဂိုးဖန်တီးမှု သုံးကြိမ် ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အဲဗာတန် ဟာ ကိုပါအမေရိက ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဘရာဇီး အသင်းအတွက်လည်း သွင်းဂိုး ၃ ဂိုး ၊ ဂိုးဖန်တီးမှု တစ်ကြိမ် ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဗာတန် က အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ” အခု လောလောဆယ် ကျနော် ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ခုကို တရားဝင် လက်ခံ ရရှိ ထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အသင်း နာမည် ကိုတော့ ကျနော် ပြောပြလို့ မရပါဘူး ။ ကြာသပတေး နေ့မှာ ကစားမယ့် ပွဲမှာလည်း ကျနော် ပါဝင် ကစားမှာလား ဆိုတာကိုလည်း ပြောလို့ မရသေးပါဘူး ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဝဲလ်ကော့ ၊ ချိန်ဘာလိန် ၊ ဆန်းချက်ဇ် တို့ အသင်းကနေ ထွက်ခွာ သွားပြီး နောက်ပိုင်း တောင်ပံ တိုက်စစ် စစ်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး လိုအပ် နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂန်းနား တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကတည်းက တောင်ပံ ကစားသမားသစ် တစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်း ခဲ့ပေမယ့်လည်း ခေါ်ယူနိုင် ခဲ့ခြင်းတော့ မရှိပါဘူး ။
အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီ ဟာ တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာမှာ အီဝိုဘီ ၊ မီခီတာရန်း တို့ ထားကစား နေပေမယ့်လည်း သိပ်တော့ အဆင်မပြေ ပါဘူး ။ အမ်မရီ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသင်းမှာ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦးလောက် ခေါ်ယူဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း ဝန်ခံ ထားပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဒီနွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ မာတီနယ်လီတစ်ဦးတည်းကိုသာ ပြောင်းရွေ့ကြေး ပေါင် ၆ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူ ထားပါတယ် ။
အမ်မရီ ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း အရ တိုက်စစ်ကို အလျင်အမြန် သွားနိုင်တဲ့ ပြေးအား ၊ တိုးအား ကောင်းတဲ့ ကစားသမားတွေ လိုသလို လုပ်အားနှုန်းကောင်းတဲ့ ကစားသမားတွေလည်း လိုအပ်နေပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဇာဟာ ၊ ကာရက်စ်ကို ၊ ဖရေစာ တို့ကို ခေါ်ယူဖို့ ချဉ်းကပ် ခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေတာကြောင့် အဲဗာတန် ကို ပြောင်းလဲ ပစ်မှတ်ထားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။